Samee hoggaankaaga - John Maxwell (Audio) - Afrikhepri Fondation
Welcome BARNAAMIJKA AUDIO
DBuuggan, waxaad ku baran doontaa hoggaamintii aasaasiga ahayd ee John Maxwell u adeegsaday wadaad ahaan iyo hoggaamiye ganacsi in ka badan afartan sano. Mabaadi'daas iyo dhaqammadani waxay run u yihiin hoggaamiyeyaasha maalin kasta ee dhammaan qaybaha nolosha. Waa baaq sharaf leh in la hoggaamiyo koox - qoys, kaniisad, aan macaash doon ahayn, ganacsi - mabaadi'da aan waqtiga lahayn ee buuggan ayaa isbeddel togan u horseedi doonta noloshaada iyo nolosha dadka kugu xeeran. Dhageysiga buuggan kadib waxaad baran doontaa:
Qeexitaanka dhabta ah ee hoggaamiyaha: “Hoggaamintu waxay ku saabsan tahay saameyn. Halkan. Wax intaas ka badan ma jiraan, wax ka yarna ma jiraan
Sifooyinka Hoggaaminta: “Hoggaamintu maaha naadi u gaar ah kuwa ku dhasha. Sifooyinka lama huraanka u ah hoggaaminta waa la baran karaa. Ku xidho iyaga rabitaanka, waxna kaa joojin maayo inaad noqoto hoggaamiye ”
Farqiga u dhexeeya maaraynta iyo hoggaaminta: “Dadku ma doonayaan in la maareeyo. Waxay rabaan in la hoggaamiyo ”- ku dhiirrigelinta dadka kale inay shaqo fiican qabtaan waa hadafka hoggaamiye
Mabda'a dhiirigelinta. Dhiirigelintu iskama jirto. Waxay ka timaaddaa ficilladaada.
1 cusub laga bilaabo € 17,95
Iibso € 17,95
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 24, 2020 10:15 am
dhagsii si aad waxbadan u aqriso ...
category BARNAAMIJKA AUDIO
Ansixinta xayndaabka bogagga 500 ee daawada dhaqameed ayaa la abuuray
Kirikou waxaay ogaataa xoolaha Afrika
Deepak Chopra waxay ka hadleysaa bogsashada, jimicsiga jimicsiga iyo jimicsiga jirka